महरा पुत्र एटमको ‘अण्डा राजनीति’ - Himali Patrika
महरा पुत्र एटमको ‘अण्डा राजनीति’
हिमाली पत्रिका २४ कार्तिक २०७६, 12:16 pm
घोराही, २३ फागुन । धरै मान्छेहरु राजनीतिलाई पेशा ठान्दछन् । स्वभाविक रुपमा पेशा भनेपछि त्यसबाट अवष्य आम्दानीको अपेक्षा गरिन्छ । राजनीति गर्ने मान्छे भने पछि धेरैको मस्तिष्कमा सुकिलो मुकिलो, धारा प्रवाह बोल्न सक्ने र मनग्य पैशा खर्च गर्ने भनेर आउँद छ ।
हामीले राजनीति गर्ने मान्छेहरु दिनहुँ जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा चर्को बहश र छलफल गरिरहेको देख्छौं । तर, उनीहरुले आफ्नो जीवन यापन कसरी गरिरहेका छन् ? भनेर कसैले पनि थप जान्न चाहन्न ।
मुलतः राजनीति समाज सेवा हो । समाज सेवा भने पछि त्यसबाट आम्दानी हुने भन्ने कुरा हुँदैनन् । आखिर कसरी चल्छ त राजनीतिज्ञहरुको जीवन ? उनीहरुले बालबच्चा कसरी पालिरहेका हुन्छन् ? उनीहरले खर्च गर्ने पैशा कहाँबाट आउँछ ?
नेपाली समाजमा यो प्रश्न अनुत्तरित रहँदै आएको छ । तर, केही पात्रहरु राजनीतिको साथै उत्पादनका विभिन्न काम गरिरहेको देखिन्छ । यी मध्ये एउटा एउटा पात्र हुन् सभामुख कृष्णबहादुर महराका पुत्र निर्मल महरा ‘एटम’ । उनी नेकपा दाङ्गका प्रभावशाली सदस्य हुन्।
एटम राजनीतिका साथै आत्मनिर्भरका लागि व्यवसायमा छन् । घोराहीको पनौरा स्थित आफ्नै घरमा उनले अण्डा उत्पादनका लागि लेयर्स चल्ला पालेका छन् । उनी दैनिक विहान ६ बजे देखि १० बजेसम्म कुखुराको हेरबिचार र अण्डा संकलनको काम गर्छन् ।
एटम राजनीतिमा व्यवस्त भएको बेला उनकी जीवन संगिनि देवा महरा र सालि गोमा पुनले सहयोग गर्छन् । ‘दिगो राजनीतिका लागि अब राजनीतिज्ञहरुले आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउनुपर्छ,’ एटमले भने, ‘यदि हामीले उत्पादनतिर ध्यान दिएनौ भने हाम्रो ध्यान करप्शन तर्फ जान्छ ।’
राष्ट्रिय स्तरका नेताको छोरा एटमले आफ्नो वुवाको पँहुच प्रयोग गरेर धेरै अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्थे । उनले ठूलै नियुक्ति खान सक्थे । तर, एटम राजनीतिमा पँहुचको दुरुपयोग गर्नु राम्रो नभएको बताउँछन् ।
‘हाम्रो देशका ८० प्रतिशत भन्दाबढी जनता कृषि व्यवसायमा सम्लग्न छन्, उनीहरुको मनोवल उठाउनको लागि भए पनि मैले कृषि व्यवसाय अवलम्वन गरेको हुँ,’ एटमले भने ।
उनीले करिव दुई कट्ठा क्षेत्रफल जग्गामा टहरो बनाएर लेयर्श कुखुरा पालेका छन् । कुल १ हजार दुई सय ओटा कुखुरा मध्ये अहिले ९ सय ५० ओटा कुखुराले अण्डा पारिरहेका छन् ।
एउटा अण्डालाई थोकमा ११ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ । अण्डा उत्पादनबाट सबै खर्च कटाएर मासिक करिव एक लाख रुपैयाँ फाइदा भइरहेको एटमले जानकारी दिए । उनले राजनीति गर्दा लाग्ने सबै खर्च आफ्नै व्यवसायबाट निकालेका छन् ।
२०५३ सालमा १३ वर्षकै उमेरमा एटमले भूमिगत राजनीति शुरु गरेका थिए । तत्कालिन राज्यले घरमा आएर दुःख दिन थाले पछि एटम पनि कलिलो उमेरमा पढाई छाडेर आफ्नो वुवाले अंगालेको राजनीतिमा होमिन पुगे ।
‘म कृषि व्यवसायसँगै राजनीति गर्न चाहन्छु, मेरो दिमागमा अहिले अण्डा र राजनीति सेट भएको छ,’ एटमले भने, ‘अण्डाले म र मेरो परिवार पालेको छ, राजनीति मेरो जीवनसँग जोडिएको छ ।’